टोकियोमा क्रिसमस मनाउने ठाउँहरु खोज्दै हुनुहुन्छ कि ?(फोटो फिचर सहित ) – Nepal Sandesh
टोकियोमा क्रिसमस मनाउने ठाउँहरु खोज्दै हुनुहुन्छ कि ?(फोटो फिचर सहित )
जापान । तपाई टोकियोमा क्रिसमस कसरि मनाउने होला ? क्रिसमस मनाउँदा पारिवारिक तथा साथीभाईहरु बिच कसरि पार्टी तथा सामुहिक समारोह गर्ने योजना बनाईरहनु भएको छ भने त्यस स्थानको परिपूर्ति गर्न सहजै सक्ने स्थान भनेको टोकियो स्थित इजाकाया हो ।
यस अघि जापानमा बसेर क्रिसमस मनाउने हरुलाई यो ठाउँको बारेमा पक्कै पनि थाहा भएको हुन सक्छ । क्रिसमस मनाउँदा अक्सर गरेर प्रेमी प्रेमिकाहरुको जोडी विभिन्न पार्क, रेस्टुरेन्टहरुमा जाने गर्छन् ।
टोकियोको क्रिसमस समारोह आयोजना गर्ने गरिएको अर्को ठाउँ भनेको ओडाईबा हो । जहाँ पश्चिमी देशहरुमा प्रख्यात मानिने मदिरा तथा खानाका परिकारहरु खाएर धुमधाम संग क्रिसमस मनाउने गरिन्छ ।
टोकियोमा क्रिसमस मनाउने स्थानहरुमा यी ठाउँहरु प्रख्यात मानिन्छन् । जसमा izakaya chain मा रहेको NIJYU-MARU (ニジュウマル) मुख्य हो ।
जसमा NIJYU-MARU को पनि जापानमा १९ शाखाहरु रहेका छन्। जस्तै Akihabara (秋葉原), Ueno (上野), Shibuya (渋谷), Shinjuku (新宿), Ikebukuro (池袋), and Kichijoji (吉祥寺) आदि छन् ।
NIJYU-MARU ले क्रिसमसको अवसरमा विशेष भोजन परिकार तथा व्यंजनहरु सहितको समारोह पनि आह्वान गरेको छ । जसमा Kurisumasu Kankeinaize Setto (クリスマス関係ないぜセット)” प्रख्यात छ । जसको मुल्य कर छुट गरेर 1,225 yen तोकिएको छ ।
तपाई टोकियो भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तर धुमधाम संग क्रिसमस मनाउन चाहानुहुन्छ भने Saitama (埼玉), Chiba (千葉), Kanagawa (神奈川), Shizuoka (静岡), and Aichi (愛知) क्षेत्रमा रहेका प्रख्यात रेस्टुरेन्टहरु प्रख्यात मानिन्छन् ।
जापानमा रहेको टेबु टेबु रेष्टुरेन्टले युगल जोडीहरुलाई क्रिसमस मनाउन यस्ता सुविधाहरु सहित ८००० येनमा विभिन्न प्याकेजको घोषणा समेत गरेको छ ।
• Sake lees crackers
• Millet stuffed in steamed radish
• Mini tomato and eringi mushrooms pincho
• Millet powder and lotus root chowder
• Fresh green three-colored seaweed salad
• Radish, Koya tofu, and winter vegetable fritters
• Porcino mushroom and millet cream linguine
• Millet hamburger with gravy sauce and potato spread
• Millet and corn rice
• Set of three desserts: jelly and fruits parfait, millet powder pound cake, and cereals with amazake vanilla ice cream
• Domestically produced red tea